I-Boldenone Undecylenate (I-Equipoise) impahla ebalulekile (13103-34-9) | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Anabolics Steroids / I-Boldenone powder Series / Boldenone Undecylenate (Equipoise) Izinto ezibonakalayo
4.33 koku 5 ngokusekelwe ku 3 izilinganiso ikhasimende
SKU: 13103-34-9. Categories: I-Boldenone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-mass order ye-Boldenone Undecylenate (Equipoise) impahla ebalulekile (13103-34-9), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Boldenone Undecylenate (I-Equipoise) Ividiyo ephathekayo ebonakalayo
I-Boldenone Undecylenate (I-Equipoise) Ama-Raw material ayisisekelo Abalingiswa
Igama: I-Boldenone Undecylenate (I-Equipoise) Ama-Raw material
Formula Yamamolekhula: C30H44O3
Isisindo somzimba: 452.6
I-Melt Point: RT
Isitoreji Sokugcina: -20
Umbala: Amafutha aphuzi
I-Boldenone Undecylenate Ukusetshenziswa okubonakalayo okubonakalayo kumjikelezo we-steroids
Ama-Raw Materials Names Raw
I-Equipoise Raw material ngokuvamile ibizwa ngokuthi yi-Bold U, BU, Equipoise Raw impahla, i-EQ yizici ze-bodybuilders noma abanikazi be-UGL.
I-Boldenone Undecylenate (I-Equipoise) Ukusetshenziswa okubonakalayo kokusetshenziswa kwempahla
I-Boldenone Undecylenate Raw material ijwayele ukusetshenziswa njengamafutha ajojelwe. Emakethe, kune-200mg / ml, i-250mg / ml, i-300mg / ml, i-UGL ethile yenziwe ngisho ne-350mg / ml ne-400mg / ml. Kodwa, kuyoba namandla kakhulu ukujova.
I-Boldenone Undecylenate Raw material ngokuyinhloko ilingana ne-hormone Dianabol, ngaphandle kwe-Dianabol hormone yenzelwe ukusetshenziswa ngomlomo futhi iqukethe isakhi se-17AA futhi ngenxa yalesi sizathu sinempilo engamahhafu amahora ayisishiyagalolunye. I-Equipoise impahla engavamile ayiqukethe iqembu le-17AA elenza i-Dianabol ibe mfushane kangaka, okwenza ukuthi i-EQ ihlale emzimbeni isikhathi eside futhi ngaleyo ndlela yenza kube yimpumelelo kakhulu ekwakheni isisindo somzimba osindayo namandla.
I-Boldenone Undecylenate Raw material, ebizwa nangokuthi i-EQ, isetshenziselwa izici zomzimba kanye nabagijimi ukukhulisa imizimba yabo yegazi, kwandise ukukhuthazela nokuphakamisa ukukhiqizwa kwamaseli obomvu emzimbeni okusiza futhi ukukhuthazela ngoba amaseli abomvu aphethe i-oxygen futhi uma igazi lakho licebile i-oxygen, uhlala isikhathi eside ngesikhathi sokusebenza okunzima noma ukusebenza. I-Boldenone Undecylenate Raw material, noma i-EQ idume phakathi kwabagijimi, abakhi bomzimba kanye nabathandekayo bokuzivocavoca ngoba inikeza inzuzo encane kodwa eqhubekayo phakathi nemijikelezo yokuncintisana. Le mijikelezo ibizwa ngokuthi i-EQ eyinzuzo. I-EQ ingalawulwa ngezilinganiso ezivela ku-200mg kuya ku-600mg ngeviki ngokungamaviki ayishumi nambili.
Isexwayiso ku-Boldenone Undecylenate Raw material
Nakuba ihlala isikhathi eside kakhulu, i-Equipoise Raw impahla ifakwe okungenani kanye ngesonto ngabagijimi. It is avame ukusetshenziswa ngesikhathi umthamo 200-400mg (4-8 ml, 50mg version) ngeliviki amadoda, 50-75 MG ngeliviki abesifazane. Uma inguqulo ye-25mg ibe yikhiqiza kuphela etholakalayo, ivolumu yomjovo ingase ingakhululekile. Isimiso sokulinganisa singaphinde sihlukaniswe, mhlawumbe imijovo enikezwa nsuku zonke ukuze kuncishiswe ukukhululeka. Omunye kufanele futhi aqaphele ukujikeleza amasayithi okujola njalo, ukuze agweme ukucasuka noma ukutheleleka. Uma ivolumu inkulu kakhulu ingenela endaweni eyodwa, i-abscess ingahle ifake idinga ukukhipha ukuhlinzwa. Ukuze ugweme inkinga enjalo, abagijimi bavame ukukhawulela umjovo ngamunye ku-3ml futhi basebenzise kabusha isayithi ngalinye okungaphezu kwesisodwa ngesonto, mhlawumbe njalo njalo ngesonto. Nge-Equipoise Raw material lokhu kungadinga ukusebenzisa hhayi kuphela i-gluteus, kodwa futhi namathanga angaphandle kwendawo yomjovo. Yiqiniso wonke umuntu enezinkinga ezihambisana 25mg futhi 50mg dosed imikhiqizo kuyaqedwa ne entsha ye 100 mg kanye 200mg / izinguqulo ml le steroid, anikeza ngokucacile umsebenzisi okuningi umthamo inkululeko futhi umjovo induduzo.
Impendulo engathí sina ye-Equipoise Raw material iyisikhathi eside sokuphila, okungenani okungenani izinsuku ezingu-12. Lokhu kubangela isikhathi esingeze isikhathi ngemuva kokujola kokugcina lapho amazinga angenasiphelo ngokwanele ukuze abe ne-anabolism engcono, noma aphansi ngokwanele ukuvumela ukululalwa kwenzeke. Isixazululo salenkinga ukusebenzisa i-Equipoise Raw impahla kuphela engxenyeni yangaphambili yomjikelezo.
Ngaphandle kokuthandwa kwe-EQ phezu kwe-Dianabol, i-Equipoise Raw impahla isanda kukhula ekuthandeni futhi iyintandokazi yamandla we-powerlifters. Abaqeqeshi babheka i-EQ njengendlela yokukhetha esikhundleni se-Deca Durabolin, ngenxa nje yokuthi amandla azuza kanye nekhwalithi ye-muscle mass ne-EQ yenzeke ngaphandle kwemiphumela emibi ye-Deca. Ukwengeza, i-EQ ithinta kahle ukujikeleza kwegazi emzimbeni wonke, ohlinzeka ngemisipha yomzimba wakho ngegazi elikhulu elidinga ngesikhathi sokuqeqeshwa kanye / noma ukuphakamisa.
Akuyona isakhi esikhulu esakhiwe ngokushesha, kunalokho i-Equipoise Raw impahla izobukwa ukuze inikeze amandla kancane kodwa angenele amandla kanye nesisindo semisipha. Imiphumela emihle kakhulu yalesi sidakamizwa ibonakala uma isetshenziselwa imijikelezo emide, ngokuvamile ihlala isikhathi eside kunamaviki angu-8-10 esikhathini eside. I-muscle ithole akufanele ibe yi-bulk ebusayo ebonwe nge-androgens, kodwa ichazwe kakhulu futhi iqinile. Njengoba amanzi e-bloat ayenganikeli kakhulu ubukhulu bomzimba, ubukhulu obuningi obutholakala emjikelezweni we-Equipoise Raw impahla kungagcinwa ngemuva kokuba isidakamizwa siphelile. Kuyathakazelisa ukuphawula ukuthi izinto ezihleliwe ze-Equipoise Raw kanye nezidakamizwa zakudala zakwa-Dianabol cishe zifana. Esikhathini se-Equipoise Raw material i-compound isebenzisa i-l7beta ester (engahloliswanga), kanti i-Dianabol i-17 alpha alkylated. Ngaphandle kwalokhu ama-molecule afana. Yiqiniso benza ngendlela ehluke kakhulu emzimbeni, okuzobonisa imiphumela ye-17-methylation ngaphezu nje kokusebenza ngomlomo kwe-steroid.
Lesi yisisindo somsisekelo we-testosterone ne-Equipoise Raw. I-Equipoise Raw impahla ivumela umthamo ophansi we testosterone, ngaphandle kokudela okuningi ngokwezinzuzo ezilindelekile. I-Estrogen buildup kufanele ilawulwe ngalesi sikhwama, kodwa nokho kufanele ifike iphuzu lapho lisiza ekukhuthazeni isimo sama-anabolic. Isiqalo sokwakha imisipha. Umjikelezo omkhulu kubo bonke abaqalayo ekwakheni umzimba kanye nabanye abafuna ukuzuza ngobuningi. I-Cycle iphumela ekuzuzeni okuningi ngezinto ezilinganisiwe ze-androgen.
I-Boldenone Undecylenate Raw material
I-EQ inhlobo yezinto eziluhlaza oketshezi. I-oda elincane 10grams / 10ml.
I-Boldenone Undecylenate Raw material Marketing
Indlela yokuthenga impahla ye-Boldenone Undecylenate Raw: Thenga i-Equipoise Raw impahla kusuka ku-AASraw
I-AASraw inikeza ubumsulwa 98% Boldenone Undecylenate / Equipoise i-powder eluhlaza kuma-bodybuilders noma amalabhu angaphansi komhlaba wokusetshenziswa komjovo.
Equipoise Raw material Ukupheka:
I-10g i-Boldenone Yehlulekile ukukhipha imfucumfucu
I-17.5ml i-Ethyl Oleate (EO)
I-16ml I-Oil Grapeseed (GSO)
I-1.5ml BA (3%)
I-7.5ml BB (15%)
I-12 ml GSO
I-1.2ml BA (3%)
I-6ml BB (15%)
I-12g i-Boldenone Yehlulekile ukukhipha imfucumfucu
I-8ml BB (20%)
I-Boldenone Undecylenate: I-8 I-Effo Side Effects You Ufuna Ukugwema
I-Equipoise (I-Boldenone Undecylenate Injection) Ulwazi lwezobuchwepheshe, ikhasi 1-9
I-Steroid Analysis, ehlelwe nguHugh LJ Makin, DB Gower, ikhasi 815-823
Ukuhlaziywa Kwemikhiqizo Yezindawo Zokuhlala Ezidakamizwa Zezidakamizwa ezingekho ElwaMithi Ekudleni, okuhlelwe nguJackF. UKay, uJames D. MacNeil. I-Jian Wang, ikhasi le-193